The People’s Charter – Shona version | WOZA
Acrobat PDF version (86KB)
Zviroto zve Zimbabwe
Itsva Gwaro Rinoratidza Gwara Regutsaruzhinji
Zvizvarwa zveZimbabwe, takabatana uye neushingi, tinoti:
Kwapera makore makumi maviri nematanhatu tawana kuzvitonga kuzere, rusununguko nemikana yakaenzana yatakavimbiswa hazvisati zvazadzikiswa.
Zviroto zvataiva nazvo zvekugara zvakanaka- ruremekedzo, kugarika nekuchengetedzeka – zvangova madzikirira. Zvavakuda kuti vanhu veZimbabwe tidzokere kuzviroto zvakanaka uye kuzvishandura kuzviiita zvinhu zvinoonekwa nekubatika.
Tinofanirwa kurangarira kuti tinokodzera kuwana zvirinani uye hatifanirwi kutya kubvuma kuti ikodzero yedu kuva neramangwana rakanaka uye kuti tinekodzero yekubatsira kurivaka.
Naizvozvi, isu vanhu veZimbabwe, madzimai, varume nevana, vemarudzi nezvitendero zvose, takabatana pamwechete, tiinekuremekedzana uye sevanhu vakaenzana, tinogamuchira gwaro rinoratidza gwara regutsaruzhinji, tiinekuziva kuti kana takabatana tinogona kuwana zvatinoshuvira zvese.
Takazvipira kushandirapamwe nesimba, ushingi netarisiro, kusvikira zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvawana kugara munyika inekusununguka kwechokwadi, runyararo uye kuremekedzwa.
Tese Tichava Nerusununguko uye Kuenzana
Vanhu vese vemuZimbabwe vachava nekuenzana, zvisinei kuti murume kana mukadzi, urema, ganda, rurimi kana nzvimbo yaunobva. Kodzero dzemadzimai nevana dzichasimudzirwa pamwe nekuchengetedzwa.
Tichadzidziswa kodzero nerusununguko rwatinopiwa nebumbiro remitemo yedu uye nemimwe mitemo yemuAfrica neyepasi rose kuti tigogona kusununguka mairi zvizere.
Tichava nerusununguko rwekusangana, kuronga nekutaura mifungo yedu pasina kutya kana kutyityidzirwa.
Vanhu Vachava Nechekuita Muutungamiri
Vanhu vachaziviswa nekukurudzirwa kuva nechekuita zvizere muutungamiri hwese hwenyika, vachidudza kodzero dzavo sezvizvarwa zveZimbabwe.
Munhu wese akazvarirwa muZimbabwe achabvumidzwa kuva chizvarwa chenyika ino, zvitupa zvekuzvarwa, ID nemagwaro ekufambisa (passport), zvichawanikwa nyore kuzvizvarwa zvose zvenyika ino.
Vanhu vachasununguka kusarudza mutungamiri wavanoda, pasina kutya kana kutyityidzirwa. Vatungamiri vezvinzvimbo zvese zvematongerwe enyika vachasarudzwa kupfurikidza nesarudzo dziripachena, pasina kubiridzira.
Madzimai anofanira kukurudzirwa kugara zvigaro zveutungamiri kuitira kuti pave nekuenzana pakati pevarume nevakadzi.
Panofanirwa kuva nesangano rakasununguka uyerakazvimiririra rinoongorora sarudzo uye sarudzo dzinofanirwa kuongororwa nevaongorori vasina bato rezvematongerwo enyika ravakarerekera, vachabva muAfrica nemhirikwemakungwa.
Vanhu vachava nerusununguko rwekutsigira bato rezvematongerwo enyika ravanoda uye pasina kusarudzwa kana kusiirirwa nekuda kwebato ravanotsigira.
Makambani enyika, vanoraira makambani aya, kanzuru nevanoona nekufamba zvakanaka kwenzvimbo dzigere vanhu vachashanda nekutungamira nenzira yakasununguka uye vasina bato rezvematongerwe enyika ravakarerekera.
Vatungamiri vese, vari pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana, vachava vanhu vakatendeka, vanehanya nevanhu vavanotungamira uye vanemoyo inorangarira kutambura kwevanhu uye vachiita mabasa ekuvandudza nharaunda dzavo.
Vatungamiri vari pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana, vacharemekedza vanhu zvakaenzana, vachateerera matambudziko avo nekuvabvunza mifungo yavo pakutoramatanho uye kuvaudza mamirire ezvinhu.
Vatungamiri vanofanirwa kunzwisisa kuti mashandiro avo anokotsororwa, uye kubvuma kuti vanhu vakavasarudza vane kodzero dzekushoropodza nekuongorora mitemo nematanho avanotora.
Vatungamiri vari pazvinzvimbo zvese vanofanirwa kushoropodza uori nechizivano pamberi pevanhu.
Madzishe nemadzisabhuku havafanirwi kusarudzwa nevezvematongerwe enyika asi semasarudzirwo avaisiitwa panguva yemakare. Vanofanirwa kuva vanhu vasina bato rezvematongerwe enyika ravakarerekera, uye vanofanira kugara munharaunda dzavanotungamira kwete mudare Pariamende.
Pachava nebumbiro remitemo idzva- rakanyorerwa zvizvarwa zveZimbabwe, rakanyorwa nezvizvarwa zveZimbabwe.
Mitemo yese yeudzvanyiriri inotsikirira kodzero dzevanhu yakaita se POSA ne AIPPA ichabviswa.
Nyika ichatongwa zviripamutemo uye munhuwese achava pasi pamutemo, munhuwese achatongwa zvakaenzana pasi pamutemo, pasina rusarura uye zvisinei kuti ndewebato ripi rezvematongerwe enyika.
Vatongi vedzimhosva vachashanda varibazi rakazvimirira roga uye risina bato rezvematongerwe enyika rarakarerekera, rakazvipira kusimudzira mutemo uye kukurudzira kutongwa kwedzimhosva kusina ubiridziri.
Mapazi ese ehurumende, kunyanya vashandi vehurumende (civil servants) vanosanganisira mapurisa nemauto, vachashanda vasina bato rezvematongerwo enyika ravakarerekera uye vachashanda vachitevedzera zvido zvevanhu.
Vasungwa vachabatwa zvinehunhu, vachigara zvinechiremera chinodiwa nemunhu wese uye vachiwana dzidziso yekuti vagogona kudzoreka nekuti vagogara zvakanaka nevanhu munharaunda dzavakabviswa. Vana vadoko vanenge vapara dzimhosva vachabatwa zvinoenderana nezera ravo nemapurisa kunyangwe nematare edzimhosva nemumatirongo.
Ivhu Iri Nderedu
Chirongwa chekugohwa patsva kwevhu chinofanirwa kutangidzwa uye ivhu rinofanira kupiwa kumunhu wese zvakaenzana, zvisinei neganda kana kuti murume kana mukadzi uye kunevanogona kushandisa ivhu zvakanaka kuti vagobatsira zvizvarwa zveZimbabwe.
Pachava nekuremekedza kodzero dzevanhu dzekuva nepfuma.
Varimi vachawana rubatsiro rwemari nezvekushandisa kuti vagogona kurima zvine pundutso.
Varimi vachawana mitengo inoenderana nezvirimwa zvavo pakutengesa uye vachava nekodzero yekutenga nekutengesera wavanoda vakasununguka, pasina kutyityidzirwa kana kumanikidzwa.
Hurumende ichaita zvese zvinogoneka kuti iunze budiriro kumativi mana ese enyika zvakaenzana, mumaruwa nemumadhorobha, izvi zvichasanganisira migwagwa, zvipatara, nezvimwe zvinodiwa.
Hurumende ichakurudzira kuvandudzwa kweupfumi hwenyika uye kuwanikwa kwemabasa kuitira kuvandudza upenyu hwezvizvarwa zvese zveZimbabwe.
Hurumende ichaita zvese zvainogona kudzikisa kukwira zvakanyanya kwemitengo wezvinodiwa pakurarama kupfurikidza nenhaurirano dzinosanganisira zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuti kubhadhariswa kwemitero kuve pachena uye kuudzwa kuti mitero yavo inofambiswa sei.
Hurumende ichazvipira pachokwadi kupedza uori kuti husapfukuta upfumi hwenyika nekukurudzira kuvandudzwa kweupfumi.
Mari ichavaneuremu uye tichava nemari yechokwadi kwete macheki.
Kodzero Yekuwana Raramo
Munhu wese achava nekodzero yekuwana raramo kuti asararama nezvekupiwa kana kupemha uye kudzivirira chiremera.
Pachava nemabasa anoringana, nzvimbo dzekushandira dzakanaka uye mashandiro anehunhu, vashandi vachiwana mibairo inokwana kuvararamisa uye inoenderana nebasa nemashandiro avanoita.
Mari nezvimwe zvekubatsira kutanga mapurojekiti ekuti vanhu vagone kuzviraramisa zvichawanikwa, kunyanya kunevechidiki uye shirikadzi.
Vanhu vachabvumidzwa kutengesa, maresinesi uye dzimba dzekutengesera dzichapiwa zviripachena, zvisina kubiridzira kana chizivano.
Pachava nekudya kunokwana munhu wese.
Zvinhu zvese zvinodiwa zuva roga roga pakurarama kwevanhu (basic commodities) zvichawanikwa huye nemitengo yakaderera- inogonekwa nemunhu wese, uye kana zvichifanirwa, pachava nekutarwa kwemitengo kuti munhu wese azviwane.
Vanhu vese vachawana mukana wekugara mudzimba dzakanaka dzine mutero wakareruka, mitero ichadzikiswa uye pachava nekuremekedza kodzero yekuva nepfuma (property rights).
Nzvimbo dzese, madhorobha nemaruwa, dzichawana mikana yekuitirwa zvese zvinodikwa kuti vanhu vararame zvineutano semvura yakachena, masewage anofambiswa zvakanaka uye kubviswa kwemarara munzvimbo dzinogara vanhu nezvimwe zvakafanira.
Nzvimbo dzese, madhorobha nemaruwa, dzichawana magetsi nemitengo inokwaniswa nemunhu wese.
Pachava nezvifambiso zvinosvika nzvimbo dzese mativi mana enyika, nguva dzose uye nemitengo inogonekwa nemunhu wese. Vakwegura vanofanirwa kufamba pasina muripo.
Vanoshaiwa kana vanotambura vatigere navo vanofanirwa kuchengetwa, vanhu vanosanganisira vakwegura, shirikadzi, varikurarama neutachiona hwe HIV/AIDS, nherera uye zvirema, vachachengetwa zvakanaka nehurumende.
Vanhu vese vachawana kodzero yekuzorora, kutamba mitambo yakasiyana siyana uye kuwana nzvimbo dzekutandarira.
Mwana wese anekodzero yekuwana dzidzo pasina rusarura. Avo vasina mari dzekuenda kuzvikoro vachawana rubatsiro rwemari yechikoro.
Dzidzo yepuraimari (primary) ichawanikwa pachena uye dzidzo yekusekondari (secondary) ichawanikwa nemari iri pasi sezvatakavimbiswa muna 1980 patakawana kuzvitonga kuzere.
Vadzidzi vese vachawana dzidzo yepamusoro, vachadzidzisirwa mudzimba dzekudzidzira (classrooms) uye vachawana zvekushandisa zvakakwana zvinosanganisira mabhuku ekunyorera nekuverenga, zvituro nematafura nezvimwewo.
Pachava nevadzidzisi vakadzidzira basa ravo vakakwana uye vakazvipira kudzidzisa vatungamiri vemangwana. Tinofanira kuvaremekedza zvakakwana nekuvapa mibairo (salary) inokwana kuti vararame upenyu husiri hwekutamburira.
Munhu wese achagona kurapwa nemutengo wakaderera uye unogona kubhadarwa nemunhu wese.
Zvipatara nemakiriniki zvichava nemishonga uye michina nemidziyo yekushandisa yakakwana.
Varikurarama neutachiwona hwe HIV/ AIDS vachawana mishonga (ARVs), vasina mari yekuitenga vachaipihwa pachena pasina chavanobhadara, uye kana zvichifanira, zvekudya pachena, mahara.
Vakwegura vacharapwa uye kupiwa mishonga pachena.
Pachava nevarapi (vanosanganisira madhokotera nemanesi) vakadzidzira basa ravo vakakwana uye vachabata vanhu zvakanaka, zvinehunhu uye ruremekedzo. Tinofanira kuvaremekedza zvakakwana nekuvapa mibairo (salary) inokwana kuti vararame upenyu husiri hwekutamburira.
Vanhu vachavanekodzero yekufa zvinehunhu uye zvinechiremera, mitengo yekuviga vanhu, semutengo wemakuva nezvimwe, unofanira kuvawakadzikira.
Pachava nevatepfenyuri venhau vemaradio, vematerevhizhini nevanyori vemapepanhau vakawanda uye vakazvimirira voga, vachatepfenyura nekunyora nyaya dzechokwadi uye vasinabato rezvematongerwo enyika ravakarerekera.
Kuchanyorwa nhau dzinehudzamu, dzisina bato rezvematongerwe enyika kwadzakarerekera uye mapato ezvematongerwe enyika anofanira kuwana mukana wakaenzana wekunyorwa kana kutaurwa nezvawo pamhepo.
Pachava nekukumbira ruregerero zvinonzwisisika neavo vakaronga Gukurahundi uye vachapa tsananguro dzechokwadi kuti uipi uhwu hwakaitirwei.
Vakapona paGukurahundi uye mhuri dzeavo vakanyangarika dzinofanirwa kubhadharwa.
Hari dzakabviswa kunzvimbo inoyera yeNjelele kuMatopos, Matabeleland, dzinofanirwa kudzoserwa, kushaiwa ruremekedzo kwakaitwa pakudzibvisa kogadziriswa uyekwokumbirwa ruregero.
Vakarasikirwa nedzimba pakaitwa chirongwa cheMurambatsvina vanofanirwa kupiwa dzimba dzavakavimbiswa uye vanofanirwa kuripwa.
Vatungamiri varikuba nevakaba upfumi hwenyika kupfurikidza nehuori vanofanirwa kutongwa mumatare edzimhosva.
Munhu wese achava nekodzero dzinoenzana dzekushandisa rurimi rwake uye kutevedzera tsika nemagariro ekwaanobva.
Zvizvarwa zveZimbabwe, kunyanya vechidiki, vanofanirwa kudzidziswa tsika nemagariro avo neavamwe kuitira kuti vagogona kuremekedza tsika dzavo nedzevamwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe vanhu vagara vaineushamwari- ngatiratidzei ushamwari uhu kuvavakidzani vedu, muAfrica nemhiri kwemakungwa kuti vagotibatsira kuvaka nyika yechizvarwa Zimbabwe.
Vese vanoda Zimbabwe ngatibatanei pakushandura zviroto zvegwara regutsaruzhinji negadziriso yeiupi hwakaitika muzimbabwe kuti zvigovapo pachokwadi.